Waa maxay Farqiga u dhexeeya Saliidda CBD iyo Spectrum CBD Saliid Buuxda? - Dukaanka Qadka ee CBD
Waa maxay Farqiga u dhexeeya Saliidda CBD iyo Spectrum CBD Saliid Buuxda?
Waxyaabaha Spectrum CBD ee Saliida oo buuxa ayaa si xawli ah ugu soo kordhaya caannimada faa'iidooyinka caafimaadka oo ay ku jiraan ka -hortagga arrimaha hurdada, xanuunka, bararka iyo welwelka. Waxaa laga yaabaa inaad taqaan qaar ka mid ah adeegyadan, si kastaba ha ahaatee waxaa jira laba nooc oo kala duwan oo ah alaabooyinka CBD ee ku jira Suuqa CBD. Baro wax kasta oo aad u baahan tahay inaad ka ogaato go'doominta CBD vs. saliid CBD buuxa spectrum, oo ay ku jirto awoodda mid kasta, isticmaalka lagu taliyay iyo sida loo kala go'aansado labada.
WAA MAXAY FULL SPECTRUM CBD?
Geedka hemp ama xashiishadda ayaa hoy u ah boqolaal phytochemicals, oo ay ku jiraan cannabinoids sida, terpenes iyo qurxinta kale ee kiimikada. Muuqaalka buuxa ee CBD Saliid waxaa loola jeedaa badeecooyin ay ku jiraan wax ka badan kaliya xarunta CBD, sida molecules -ka kale ee dhirta sida asiidhyada dufanka, THC iyo terpenes -ka oo aan weli is -beddelin. Saliidda CBD oo dhan waxaa badanaa loo yaqaan "geedka oo dhan" saliid sababta oo ah qurxinta kiimikada buuxda ee soosaarka dhirta ayaa lagu daray.
WAA MAXAY CBD ISOLATE?
Go'doominta CBD waxaa caadiyan lagu calaamadiyaa "CBD saafi ah" ama marka loo eego 99 illaa 100 boqolkiiba CBD. Sida laga yaabo inaad ka qaadatay magaca, alaabtan ayaa loo safeeyay inay go'doomiyaan kaliya xarunta CBD oo aan lahayn terpenes ama cannabinoids dheeri ah. Awooddeeda CBD caadi ahaan way ka sarraysaa baaxadda buuxda, taasoo la micno ah in qiyaas yar la qaato sida caadiga ah.
ISTICMAALKA FULL SPECTRUM SALIIDKA CBD VS CBD ISOLATE
Muuqaal buuxa CBD Saliiddu waxay inta badan doorbidaa in la cuno go'doominta CBD sababta oo ah cilmi -baaristu waxay muujineysaa in terpenes iyo cannabinoids ay si dabiici ah ugu wada dhacaan marka la isku daro waxay u dhexgalaan siyaabo waxtar leh. Iskudhafkan waxaa loogu yeeraa saamaynta ku xeeran waxaana la rumeysan yahay inuu CBD siinayo gaarsiin ballaaran ilaa faa'iidooyinka caafimaadka.
Hal daraasad cilmi baaris ah oo uu dhammaystiray Ethan Russo, MD, ayaa baaray faa'iidooyinka terpenes ee CBD oo dhan, oo muujinaya natiijooyin rajo leh xaalado kala duwan. Tusaale ahaan, isku-darka terpenes caryophyllene pinene iyo myrcene oo ka caawiya tor inay yareyso welwelka, iyadoo la isku darayo terpenes limonene iyo cannabigerol (cannabinoid aad u yar) waxay muujineysaa ballan qaadka daaweynta MRSA. Xitaa terpenes limonene oo la jaanqaada CBD waxay u sameysaa daaweyn ka hortag finan. Baadhitaankan ayaa muujinaya CBD oo dhan waa wax badan oo ah waayo-aragnimo jirka oo dhan ah.
Daraasad kale oo cilmi baaris Israel ah oo ku saabsan awoodda CBD go'doomi marka la barbardhigo muuqaalka buuxa ee CBD waxay muujisay in muuqaalka buuxa ee CBD uu aad ugu faa'iido badan yahay goobaha caafimaad ee xaaladaha sida walaaca iyo bararka. CBD-da daahirka ah waxay dhalisay “jawaab-qaadasho qiyaasta gambaleelka ah”, taas oo macnaheedu yahay, markii xaddiga CBD uu dhaafo meel cayiman, saamayntii caafimaad ee dawaynta ayaa si weyn hoos loogu dhigay.
Si kastaba ha noqotee, tani macnaheedu maahan in go'doominta CBD aysan waligeed faa'iido lahayn. Isticmaalayaasha qaarkood oo si gaar ah ugu nugul THC waxay u jeestaan ​​go'doominta CBD si ay uga faa'iideystaan ​​geedka hemp iyada oo aan lahayn waxyeellooyinka nafsaaniga ah ee THC. Sidoo kale kuwa ka walwalsan tijaabada togan ee THC waxay doorbidaan go'doominta CBD. Intaa waxaa dheer, CBD waxay go'doomisaa sidoo kale waxay u oggolaaneysaa adeegsadayaasha inay diiwaangeliyaan inta ay CBD ka qaadanayso qiyaas kasta.
CBD ma ISOLATE MISE BUUXA QALABKA DHAN CBD WAA KA WANAAGSAN?
Haddii aad doorato Spectrum CBD buuxa ama CBD go'doomin, waxaad u badan tahay inaad la kulmi doonto faa'iidooyinka caafimaad ee geedka cannabis. Iyada oo ay sii kordhayaan daraasadaha soo kordha, cilmi baarayaashu waxay maalin walba wax badan ka bartaan farqiga u dhexeeya labada nooc ee alaabada CBD. Intaas waxaa sii dheer, kuwa ku nool gobollada aan weli laga helin CBD buuxa, CBD saafi ah badiyaa waxay bixisaa xal sharci iyo mid togan. Ka dib oo dhan, xitaa waxoogaa CBD ah ayaa ka faa'iido badan CBD midna.
Red Emperor CBD FULL SPECTRUM CBD Saliid
Red Emperor CBD waxay leedahay tayada ugu sareysa Spectrum CBD buuxa lagu iibiyay onlaynka iyo tijaabintayada saddexaad ayaa dammaanad qaadeysa inaad heli doonto xaddiga saxda ah ee CBD.